Imbali - Xuzhou Roc International Trading Co., Ltd.
Ifilimu ejongene neplywood
I-OSB (iBhodi yeStrand esekwe)
I-MDF / HDF
Ibhodi ye-HPL engacimi umlilo
Ukungenisa ngaphakathi kunye neNkonzo yokuThumela ngaphandle
Yasekwa ngonyaka ka-1993 ngotyalo-mali lwe-RMB 300,000, indawo ekuhlalwa kuyo yinkampani zizikwere zeemitha ezingama-5,000, kwaye inani labasebenzi li-32 yokujikeleza ukusika ipoplar veneer yeyona mveliso iphambili. Ingeniso yonyaka ijikeleze i-RMB 3,000,000
Ngo-1997, iXuzhou Ekhaya World Wood Co., Ltd. yasekwa kunye mali RMB8,000,000, egubungele 33.000 square metres nokuba ngumnini abasebenzi abangaphezulu kwama-200. Kulo nyaka, amandla emveliso kubandakanya ifilimu ejongene neplywood, iplywood.
Ngonyaka ka-2008, i-RMB 20,000,000 yatyala imali ekwandiseni umzi-mveliso ukuya kuma-50, 000 eemitha zesikwere. Kwaye inani labasebenzi lenyuswe laya kuma-500. Ngeli xesha, ngonyaka sinikela nge-10, 000 yeekyubikhi zeplywood ezimbejembeje kunye nama-30,000 eekyubhiki mitha enye iplanga. Ingeniso yonyaka inyukela kwi-RMB 160,000,000
Ngotyalo-mali lwe-yuan ye-120 yezigidi, iqela lasekhaya lasekwa, eligubungela i-133,000 yeemitha zesikwere. Ivelisa minyaka le i-250,000 cubic metres ifilimu ejongene neplywood, i-23,000 ye-cubic metre iplywood, i-100,000 cubic metres ifilimu ejongene neplywood kunye ne-5,000 cubic metres enye iplywood ekhethekileyo. Ixabiso lonyaka lokuphuma liye kuthi ga kwi-RMB 4,000,000,000.
Ngaphezulu kweminyaka engama-20 yophuhliso, ngoku i-senso ineenkampani ezingaphezulu kwe-9 ezizezabanini ngokupheleleyo kunye neenkampani ezibambeleyo.
INKXASO-MALI YEKHAYA LEHLABATHI LASEKHAYA
-I-ROC yorhwebo lwamanye amazwe Co., Ltd. Ukuthumela ngaphandle kunye nokungenisa ishishini, uyilo lwePlywood kunye noVavanyo
- Zhengquan Umthi Co., Ltd. -Ulwakhiwo lomvelisi weplanga
-I-Zhanpeng Timber Co, Ltd. -Ulwakhiwo lomvelisi weplanga
-I-Lifeng yemizi-mveliso yamaplanga Co., Ltd. -Umvelisi weplywood wentengiso
-Tongshun iinkuni Co., Ltd. Ukupakisha umvelisi weplywood
- Zengyin Umthi Co, Ltd. -LVL iplanga lokukhuphela, umvelisi we-LVL
-IFANITSHALA Ifenitshala Co, Ltd. Umvelisi wefanitshala
Iimveliso zehlabathi zasekhaya
Idilesi: IZiko leSenso, isiXeko sasePizhou, kwiPhondo laseJiangsu, China